Chelsea Oo Guu Daro Xanuun Badan Dhabarka U Saarisay Kooxda Crystal Palace
HomeWararka Ciyaaraha MaantaChelsea oo guu daro xanuun badan dhabarka u saarisay kooxda Crystal Palace
Chelsea ayaa booqasho ugu tagtay kooxda Crystal Palace kulan ka tirsan Horyaalka Premier league iyadoo ugu soo badisay 1-4 kulan ka dhacay garoonka Selhurst Park, Xidigaha Blues ayaana sii adkeestay booskooda afaraad kadib si ku meel gaar ah oo kooxda Liverpool ugu jirtay.
Chelsea oo qeybta hore heshay Saddex gool ayaa goolka hore waxaa u daah furay Kai Havertz daqiiqadii 8aad halka goolka labaad uu dhaliyay Christian Pulisic ka hor inta uusan kii sadexaad ku darin Kurt Zouma geybta hore ayaana lagu kala nastay 0-3.
Blues oo kulankan inta badan gacanta ku heysay ayaa sii dheereesatay hogaanka waxana goolka Afaraad u dhaliyay Christian Pulisic Daqiiqadii 78aad kaasi oo ahaa kiisa labaad ee kulanka.
goolka kaliya ee Palace waxaa u dhaliyay Christian Benteke ciyaarta oo mareysa 63 daqiiqo.
Natiijada ayaa ka dhigan in Chelsea ay dib ugu soo labaato booskeeda 4aad iyadoo leh 54 dhibcood.